Jiro kristaly mitsinkafona mitsivalana-Orana Frozen
Algorithm dia fanehoana ny tononkalo matematika natiora. ny volavolan-jiro nataon'i Toan nguyen ， dia antokon-kintana izay toa mitsingevana eny amin'ny habakabaka toy ny andiana vorona, na orana mivatravatra. ny tetika dia manome firaketana tsy manam-petra izay azo aato ny jiro boribory amin'ny d ...
Jiro Pendant Linear miaraka amin'ny jiro S14 sy S14d nitazona jiro fantsom-pifandraisana
Tamin'ny voalohany, ny S14s (pin roa), ary S14d (pin iray) dia famolavolana fitaratra lehibe sasany. Raha ny mahazatra, misy 300mm, 500mm, ary 1000mm ho an'ny S14 (tsimatra roa), ary jiro tsipika S14d (pin iray iray), ary izy rehetra ireo dia mety ho kinova mazava sy kinovan'ny opal. Eto aho dia mitanisa ireo proucts sy atrikasa anay ...
Tamin'ny taona 1809 dia namorona ny jiro elektrika voalohany i Humphry Davy, mpamorona englisg. Nampifandraisiny ireo tehina vita tamin'ny arina, endrika karbaona singa simika, tamin'ny bateria misy tariby roa. Na dia tsy naharitra ela aza ny jiro, dia naneho fa nisy fitaovana lasa mafana be taht rehefa mamiratra ...
Ahoana ny fiasan'ny jiro UV
Alohan'ny hamaliana ity fanontaniana ity dia avelao jerena izay UV Lighting. Voalohany, andao jerena ny hevitry ny UV. UV, na ultraviolet, na ultraviolet, dia onja elektromagnetika misy halavan'ny halavany eo anelanelan'ny 10nm sy 400nm. UV an'ny tarika onja samihafa dia azo zaraina ho UVA, UVB ary UVC. UVA: ny halavan'ny onjam-peo dia lo ...
Fahazavana manokana matte fotsy sy avo lenta ary rendrarendra
Ao amin'ny trano, trano iray, dia hitantsika ny loko fotsy na aiza na aiza, rindrina fotsy, gorodona vita amin'ny marbra fotsy, andry fotsy. Na izany aza, ny fotsy dia mety ho hafa, tsy mitovy amin'ny halalin'ny loko, fotsy madio, fotsy fotsy, fotsy matevina, fotsy malama. Androany, hiresaka momba ny antony mahatonga ny matte fotsy ho tian'ny mpamorona ....
Fampandehanana jiro manokana ho an'ny Hotely Chicago
Ity hotely ity dia ao amin'ny tanàna be tabataba any Chicago. Ity no kaonty vola. Hatramin'ny fotoana voalohany nidiranao dia hahatsapa ianao fa niditra tamin'ny toerana hafa. Tsy misy afa-tsy karazana indostrialy tsotra, chandelier kely, ary io hazavana mafana io dia mangina sy foana. Ity dia zoron'ny cafe hotely ...